Ingabe ubufakazi beqiniso benkolo kuNkulunkulu uma umuntu ethokozela kuphela umusa kaNkulunkulu? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
2018-04-09 04:53:49 179
Okwedlule： Yini ukulandela intando KaNkulunkulu? Ingabe ukulandela intando kaNkulunkulu uma umuntu enza umsebenzi wokuhambisa ivangeli likaNkulunkulu kuphela?
Okulandelayo： Yini ngempela intando yomuntu olandela uNkulunkulu? Futhi yini ubufakazi beqiniso ngokukholwa kuNkulunkulu?